एसएसपीको नजरमा यि नटवरललाल चाहिं व्यापारी ? | abc.com.np
एसएसपीको नजरमा यि नटवरललाल चाहिं व्यापारी ?
काठमाडौं । प्रहरीकै भ्रष्ट हाकिमहरुको पैसा सस्तो ब्याजदरमा लिएर प्रतिदिन लाखको दश हजार रुपैयाँमा जुवाडेलाई लगानी गर्ने दलाल विरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध अनुसन्धान महाशाखाले किन अनुसन्धान गरिरहेको छैन् ? आश्चर्यको विषय बनेको छ । आफूले दिएको रकम फिर्ता गर्न नसके प्रहरी र गुण्डा प्रयोग गरी पीडितको घरजग्गा कब्जा गर्दै आएका विरेन्द्रलालका कारण दर्जनौं घरबारविहिन भएका छन् । उनको अवैध सम्पत्तिको स्रोत छानविन गरियोस् भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी परेको स्रोत बताउँछ । उदारणीय काम गरेकै कारण चर्चामा रहेका एसएसपीद्धय सर्वेन्द्र खनाल र विक्रमसिंह थापाले विरेन्द्रलाल जस्तो नटवरलाललाई अनुसन्धानमा चासो नदिएपछि ‘दालमे कुछ काला हैं’ उखान जस्तै भएको त हैन् ? आशंका उब्जिएको हो ।
विगत लामो समयदेखि विरेन्द्रलालले सर्वसाधारणलाई अवैध बन्दुक देखाउँदै धम्क्याउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अपहरण गर्ने, कानूनले बर्जित रुपैयाँ लिएर जुवाडेलाई लगानी गर्ने, पैसा उठाउन प्रहरी र गुण्डाको प्रयोग गर्ने, प्रहरीकै पैसा सस्तो ब्याजदरमा लिएर लाखको प्रतिदिन दश हजार रुपैयाँमा जुवाडेलाई लगानी गर्ने, रकम फिर्ता नगर्नेको घरजग्गा कब्जा गर्नेलगायतका काम गर्दै आएका छन् । उनको डर मात्र नभई प्रहरी प्रशासनले समेत दलाल विरेन्द्रकै साथ दिने भएकाले पीडितले प्रहरीमा अहिलेसम्म उजुरी दिने आँट गर्न सकेका छैनन् । एकताका विरेन्द्रलाल जस्तै नटवरलाल ‘मिटरराजा’ महेशबहादुर सिंहलाई एसएसपी रमेश खरेलले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाए । उनीमाथि आधा दर्जन मुद्दा लगाइए । तर रुपैयाँकै भरमा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बाहेक अन्य ठाउँमा उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । पछि आपराधिक पृष्टभूमिबाट आएका विरेन्द्रलाल जस्तो दलाललाई नै एसएसपी खरेलले ब्याजमा पैसा लगानी गरेको सार्वजनिक भयो । राम्रा भनेका एसएसपी पनि नराम्रा देखिए, कहिले उनी श्रीमतीको नाम सुराकी राखेर बदनाम भने कहिले आफ्नै हाकिमविरुद्ध व्रिफकेश काण्ड उचालेर कारबाहीमा परे । यतिखेर, विरेन्द्रलाल जस्तो दलाललाई कारबाही गर्ने शाहसिला प्रहरीको खोजी भइरहेको छ । किनकी प्रहरीका अधिकांश भ्रष्ट हामिमकै करोडौं रुपैयाँ विरेन्द्रलालले सापटी लिएर अन्य जुवाडे र व्यवसायीलाई मिटरब्याजमा लगानी गर्दै आएको छन् । जसका कारण उनलाई पक्राउ गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि प्रहरीले आँट गरेको छ्रैन् । प्रहरी संगठनमा राम्रो काम गर्ने र स्वच्छ छवि भएका प्रहरीको रुपमा चिनिएका एसएसपीद्धय सर्वेन्द्र खनाल र विक्रमसिंह थापाले विरेन्द्रलाल जस्तो दलाललाई किन पक्राउ गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने शाहस गर्दैनन् ? पीडितले प्रश्न तेर्साएका छन् । मिटरब्याजमा लगानी गरेर अवैध असुली गरेकै भरमा अर्बपति बनेका काभ्रे कानपुरका विरेन्द्रलाललाई कि महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाले विशुद्ध व्यापारी देखेको हो ? भन्दै पीडितले आश्चर्य व्यक्त गरे । यसअघि एसएसपी थापाले जुवाडे र नामुद ठग सुवासराज काफ्लेलाई मिटरब्याजमा लगानी गर्ने गायिका रेखा शाह र उनका श्रीमानलाई भने पक्राउ गरे । ११ लाखको एक करोड ४६ लाख कागज गराएकै भन्दै गायिका शाह र उनको श्रीमानलाई एसएसपी थापाले पक्राउ पनि गरे । जबकी सुवोधराज काफ्ले राजधानीका नामुद ठग हुन् र थिए । उता विरेन्द्रलालले भने मिटरब्याज उठाउन पीडितलाई कन्चटमा पेस्तोल राख्ने र अपहरण जस्ता अवैध क्रियाकलाप गरिरहेका छन् ।
प्रहरीले उनीमाथि कारबाही त परैजाओस्, अनुसन्धान समेत गर्ने प्रयास नगरेको पीडितको गुनासो छ । विरेन्द्रलालले प्रहरीकै संरक्षणमा ललितपुर निवासी सानु अवालेको घरजग्गा कब्जा गरेका थिए, जतिबेला काठमाडौं परिसरमा एसएसपी रमेश खरेल थिए । विरेन्द्रलालसँग दर्जनौं घर, घडेरी, गाडि रहेको छ । उनको आम्दानीको स्रोत केहि छैन् । उनको धन्दा प्रहरीकै संरक्षणमा गुण्डागर्दी हो । तर केहि भ्रष्ट प्रहरीका हाकिमले विरेन्द्रलाल जस्तो दलाललाई साथ दिँदा उनी अर्वपति बनेका हुन् । त्यसो त, विरेन्द्रलालले आफ्नै जेठीसासु लक्ष्मी पाठकलाई समेत छाडेनन् । सापटी लिएको पाँच लाख रुपैयाँबापत दश लाख तिर्दा समेत विरेन्द्रलालले पाठकलाई ठगी मुद्दामा एक बर्ष जेल हाले । प्रहरीका उच्च हाकिमलाई रिझाउन सुरासुन्दरीको ब्यवस्था समेत गर्ने गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । एकताका पीडितको हुल विरेन्द्रलालको कार्यालयमा पुगेपछि अबैध बन्दुक फायर गरेर पीडितलाई तर्साउन उनी सफल भए । घटनालगत्तै पुगेको प्रहरीले हतियार र अवैध दर्जनौं गोली बरामद गरेतापनि उनीमाथि प्रहरीले कुनै कारवाही गरेन् ।
त्यसैगरी, नव उदयीमान अर्का नटवरलाल हुन्–राम गिरी । ठमेलको गल्लीमा कुनै बेला केटी दलाली गर्ने गिरी अहिले अर्वपति हुने दौडमा रहेका छन् । घर भाडा विवाद हुँदा घरवेटी मिलन श्रेष्ठलाई नै धारिलो हतियार प्रयोग गरेर टाउको फुटाएपछि गिरी २७ दिन थुनिए । उक्त काण्डमा गिरीका दाहिने हात मानिएका भिलेन भनिनेले घरवेटी मिलनलाई उपचार खर्च भन्दै दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएपछि ज्यान मुद्दा मिलापत्रमा टुंगियो । टेकुको एक्साईड व्याट्रीका व्यवसायी चाचन हत्याकाण्ड र ठमेलको भिक्षु निमा लामाको गोली प्रहारमा प्रयोग भएको पेस्तोल गुण्डा गिरीले उपलब्ध गराएको बयान पक्राउ परेका अभियुुक्तले बताएपछि उनको असली धन्दा बाहिर आयो । तर प्रहरीले अहिलेसम्म उनमाथि कुनै अनुसन्धान गरेको छैन् । गिरीले समेत प्रहरीका हाकिमको पैसा विभिन्न ब्यवसायमा लगानी गर्दै आएका छन् । गिरीलाई समेत प्रहरीका डीआईजी, एआईजीको संरक्षण रहेको छ । चाचन हत्याकाण्डको चार बर्षपछि सुनील महर्जन र निरज केसीे पक्राउ परेपछि गिरीको रहस्यमय संलग्नता बाहिर ल्याए । तर काविल मानिएका एसएसपीद्धय खनाल र थापा भने बेखबर छन् । तत्काल पक्राउ परेका महर्जन र केसीले उक्त हतियार ठमेलको नशा बार रेष्टुरेन्टका सञ्चालक राम गिरी र सुरज प्रधानसँग ८० हजारमा किनेको बयान दिएका थिए । ठमेलमा फेसेस बार, दरबारमार्गमा भिक्ट्री सञ्चालन गर्दै आएका गिरी अहिले पनि विभिन्न अवैध धन्दामा संलग्न रहेको स्रोत बताउँछ । काभ्रेली समूह पर्यटकीय नगरी ठमेलबाट विस्थापित भएपछि गिरीले ठमेलमा राज गर्दै आएका छन् । गिरीलाई पक्राउ गर्ने तत्कालिन दरबारमार्गका डीएसपी राजकुमार सिलवाललाई समेत विभिन्न काण्ड लगाएर त्यहाँबाट सरुवा गरियो । त्यसमा समेत गिरीको हात रहेको थियो । एकताका लागूऔषध हालेर आफूलाई फसाउन लागेको नाटकमञ्चन गर्दै गिरीले उनको कालोधन्दाको विरोधी सई असरफअली अन्सारीलाई समेत बलिको बोका बनाए । कुनै बेला ठमेलको गल्लीमा चिया बेच्दै हिँड्ने गिरी अहिले करोडौंको मालिक छन् भने अर्वपतिको दौडमा उनी अगाडि बढेका छन् । गिरी करोड पर्ने गाडीमा हुईकिन्छन् भने उनको अवैध धनमा भ्रष्ट प्रहरीकै संरक्षण र लगानी रहेको छ । के नेपाल प्रहरीमा राम्रो काम गर्ने र योग्य, र क्षमतावान मानिएका एसएसपीद्धय खनाल र थापाको नजरमा यि दुई नटवरलाल चाहिं व्यापारी देखिएका हुन् त ? विषय सोचनिय छ ।